Sagaing – Department of Medical Service
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ (Location) နှင့်ဓါတ်ပုံ ၂။ ဆက်ရမည့်လိပ်စာ ပြည်သူ့ဆေးရုံ ၊ ကသာမြို့ – ဖုန်းနံပါတ် 075-2025031 – Fax: No မရှိ – Officia E mail address Katha@mohs.gov.mm – User Name Katha ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ General (က) ဖျားနာကုသဆောင် (ခ) သားဖွားမီးယပ်ကုသဆောင် (ဂ) ကလေးလူနာကုသဆောင် (ဃ) ခွဲစိတ်လူနာကုသဆောင် (င) အရိုး/အကြောကုသဆောင် (စ) ပြင်ပလူနာကုသဆောင် ... Read More | Share it now!
၁။ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး တည်ရှိရာနေရာ Location နှင့် ဓါတ်ပုံ ကလေးမြို့၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသည် ညောင်ပင်သာရပ်ကွက်နှင့် မင်္ဂလာဥယျာဉ် ရပ်ကွက်(၂)ခုအတွင်း တည်ရှိပါသည်။ (တည်နေရာပြမြေပုံ ပူးတွဲလျှက်) ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ကလေးမြို့ Ph – 07321636 – 07321637(Fax) – 07321511 generalhospitalkalay@gmail.com ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ (က) ကလေးကုသဆောင် (ခ) ဆေးကုသဆောင် (ဂ) သားဖွားမီးယပ်ကုသဆောင် (ဃ) အရိုးကုသဆောင် (င) ခွဲစိတ်ကုသဆောင် (စ) ခွဲစိတ်ခန်း (ဆ) အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင် (ဇ) ကျောက်ကပ်သွေးသန့်စင်ဌာန (စျ) မျက်စိကုသဆောင် (ည) နား၊ နှာခေါင်း၊... Read More | Share it now!
၁။တမူးခရိုင်ဆေးရုံ၏တည်နေရာ(Location )နှင့်ဓါတ်ပုံ ၂။ တမူးခရိုင်ဆေးရုံ၏ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ မြို့မလမ်း၊စျေးတန်း(၁)ရပ်ကွက်၊တမူးမြို့ ဖုန်းနံပါတ်၊၀၇၃၄၀၀၁၉၊၀၇၃၄၀၂၇၀ Fax;နံပါတ် -၀၇၃၄၀၂၇၀ dr.thura.pku@gmail.com ၃။ တမူးခရိုင်ဆေးရုံမှ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောအခြေအနေများ အထွေထွေပြင်ပလူနာဌာန၊ သွားနှင့်ခံတွင်းအထူးကုဌာန ခွဲစိတ်အထူးကုဌာန အရိုးနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာကုသမှု့ဌာန သားဖွားနှင့်မီးယပ်အထူးကုဌာန ကလေးအထူးကုဌာန အထွေထွေရောဂါအထူးကု(ဆေးပညာ)ဌာန ၄။ ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ (၄-၁) အထွေထွေပြင်ပလူနာဌာန၊(တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့ထိ) နံနက်(၀၉း၀၀နာရီမှ... Read More | Share it now!